Adobe ရဲ့ OpenTypeFont တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Sample Font တွေကို Adobe site မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက သူ့မှာ FontStyle (Bold, Italic) တွေ အများကြီးပါပါတယ်။ Design လုပ်နေတဲ့ သူတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်မည့် Font အမျိုးအစားပါပဲ။ သူ့ရဲ့ FontStyle တွေကတော့
Michael Sync 1:51 am
I saw your comment in my guestbook. Thanksalot for visiting my blog.
your blog is also really great..
CMS 4:22 am
thz: michanel :)
pandora 2:38 pm
ပန်ဒိုရာဆီမှာ ဒီဘလော့ဂ်ကိုလင့်ခ် ပေးချင်လို့ခွင့်ပြုပါ။
CMS 11:59 pm